Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka wuxuu ansaxinayaa amaahdii ugu horreysay muddo shan sano ah bulshooyinka u baahan - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Hawlaha Guud ee Gobolka ayaa oggolaaday amaahdii ugu horreysay muddo shan sano ah bulshooyinka u baahan
$ 6 milyan oo deyn ah dhismaha ka hor oo la siiyay 12 bulshooyinka Washington ah
OLYMPIA, WASH - Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka Washington wuxuu ansixiyay 12 magaalo iyo degmooyin qiyaastii $ 6 milyan oo deyn ka hor dhismaha ah 2018. Tani waa markii ugu horreysay muddo shan sano ah guddigu wuxuu dhaqaale ka helayaa Sharci dejinta gobolka si ay u soo saaraan amaah.
Guddigu wuxuu ka soo xushay 12 ka mid ah 15 mashruuc ee codsiyada codsaday in ka badan $ 7.5 milyan. Mashaariicdani waxay horumarin doonaan biyaha, bulaacada nadaafadda, waddooyinka, iyo nidaamyada waddooyinka ee bulshada miyiga ku nool gobolka oo dhan.
"Waxaan sugeynay waqti dheer si aan u siino dowladaha hoose kaalmada ay u baahan yihiin si loogu adeego dadka ku dhex nool beeshooda," ayuu yiri Gudoomiyaha Gudiga Howlaha Guud Scott Hutsell.
Jimcihii Abriil 13, Guddigu wuxuu oggolaaday amaahda soo socda:
Liiska amaahda Dhismaha Hore ee Hawlaha Guud ee Gobolka Washington 2018:
Magaalada Castle Rock - $ 40,000 oo loogu talagalay hagaajinta waddooyinka / jidadka
Magaalada Cathlamet - $ 55,000 oo loogu talagalay hagaajinta nidaamka biyaha
Magaalada Bariga Wenatchee - $ 750,000 oo loogu talagalay waddooyinka / hagaajinta waddooyinka
Magaalada Granite Falls - $ 500,000 oo loogu talagalay hagaajinta bulaacada nadaafadda
Degmada Kitsap - $ 727,000 oo loogu talagalay hagaajinta bullaacadaha nadaafadda
Magaalada Long Beach - $ 572,000 hagaajinta bulaacada nadaafadda
Magaalada Okanogan - $ 65,000 oo loogu talagalay hagaajinta nidaamka biyaha
Magaalada Othello - $ 182,000 oo loogu talagalay waddooyinka / hagaajinta waddooyinka
Magaalada Quincy - $ 1 milyan oo loogu talagalay hagaajinta bullaacadaha nadaafadda
Magaalada Rock Island - $ 80,000 loogu talagalay hagaajinta bullaacadaha nadaafadda
Magaalada Sequim - $ 1 milyan oo loogu talagalay hagaajinta waddooyinka / jidadka
Magaalada Yelm - $ 1 milyan oo loogu talagalay hagaajinta bullaacadaha nadaafadda
"Maalgashiga gobolka ee kaabayaasha bulshada ayaa aasaas u ah xoojinta bulshada reer miyiga ah halkaasoo culeyska maalgelinta mashaariicdan ay caqabad weyn ku noqon karto muhiimadda dhaqaale," ayuu yiri Agaasimaha Ganacsiga Brian Bonlender.
Sharci dejinta 2018 waxay u oggolaatay wadar ahaan $ 14 milyan oo deymahan ah oo caawiya dawladaha hoose. Wareegga maalgelinta ee soo socota ee $ 8 milyan ee soo hartay wuxuu furmayaa bartamaha Abriil, iyadoo codsiyada la qabanayo bisha Luulyo 2018. Sharci dejinta ayaa sidoo kale bixisay $ 5 milyan oo deyn deg deg ah taas oo ah nidaam codsi isdaba-joog ah illaa lacagtu ka dhammaato.
Hadafka Guddiga Hawlaha Guud waa inuu bixiyo dhaqaale iyo farsamo Caawinta bulshada Washington ee caafimaadka bulshada, amniga, iyo kaabayaasha deegaanka ee taageera bulshada iyo dhaqaalaha. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 13 xubnood oo guddiga ah, oo uu magacaabay Badhasaabka muddo afar sano ah. Saddex waxay matalaan degmooyin, seddex waxay matalaan magaalooyin, seddex waxay matalaan degmooyin ujeedooyin gaar ah leh, afarna waxay ka socdaan shirkadaha gaarka loo leeyahay. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo www.pwb.wa.gov.
Contact: Penny Thomas, Xiriirka Warbaahinta, (206) 256-6106
Deeqaha bulshada iyo amaahdaWar-saxaafadeedXoojinta bulshada
← Waxbarashada Macmiilku waa Mudnaanta Barnaamijka Cimilada Golaha la-talinta Guddoomiyaha Dooro Washington NMA wuxuu iftiiminayaa xoogga aerospace ee gobolka oo dhan booqashada hantida warshadaha ee Spokane →